နှလုံးသားဖြင့်ရင်းသော......: Pinocchio နှင့် တစ်ညနေ
jasmine(တောင်ကြီး) Wednesday, January 04, 2012
စာလုံး Font ကအနေတော်ဖြစ်သွားပြီကျေးဇူးနော်
ဆဲဗင်းဒီဇင်ဘာ Thursday, January 05, 2012
အလည် လာ သွားတယ်..font size ကောင်းတယ်.. အရင် font က မျက် မှန် ပါဝါ ထပ်တိုး ရမယ် ထင် နေတာ.. အခု မှ အနေတော်ပဲ။ ရောမ နိုင်ငံ က အရင် ခလေးဘ၀ထဲက ရုပ်ရှင်ကြည့် ရင် အရမ်း သဘောကျတာ.. ပုံ တွေ လှတယ်. တခေါက်တော့ သွားလည် အုန်းမယ်.
မြတ်ကြည် Friday, January 06, 2012
အစ်မရေ၊ font က အဆင်ပြေသွားပြီ :)
925 Friday, January 06, 2012
ကြည့်ရတာကော ဖတ်ရတာကော စိတ်ချမ်းသာတယ်ဗျို့ :)
မိစံ Sunday, January 08, 2012
အမတော်ကို..rename ဘယ်လိုပေးရမလဲ သိပါရစေရှင်
Tun Tun Sunday, January 08, 2012
ပုံတွေ လာကြည့်သွားတယ်။ အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို.ကောင်းတယ်။ အဲ့လိုနိုင်ငံမှာ နေရတာ ကံကောင်းပါတယ်။ ဓါတ်ပုံ ရိုက်စရာ ရူခင်းတွေ ပေါမှ ပေါ ပဲ။ စင်ကာပူမှာက ဘာမှ ရိုက်စရာ ရှိဘူးရယ်။ အဲ့ဘက်ကို တခေါက်လောက်တော့ လာဦးမယ်။
925 Tuesday, January 10, 2012
ဆဲလ်မိုး Monday, January 16, 2012